LMP, Ultrasound and Due Date – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” မီးဖှားရကျ due date တှအေမြိုးမြိုးဖွဈနလြှေငျ “
” အာထရာဆောငျး ၃ ခါရိုကျတယျ….due date(မီးဖှားမယျ့ရကျ)က ၃ မြိုးထှကျတယျ……ပွီးတော့ ကိုယျဝနျ စအပျအပျခငျြးတုနျးက အိုဂြီက ရာသီလာတဲ့ရကျနဲ့ ကိုကျပွီးတှကျပေးတဲ့ရကျကလညျး တဈရကျရှိသေးတယျ။ ဘယျဟာအတညျယူရမလဲ မသိတော့ဘူး ”
မဗိုကျတို့ ကိုယျဝနျစအပျပွီဆိုတာနဲ့ ဆရာဝနျက နောကျဆုံးရာသီလာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးရကျပျေါမူတညျပွီး မီးဖှားမယျ့ရကျကိုခနျ့မှနျးတှကျခကျြပေးလရှေိ့ပါတယျ။နောကျဆုံးရာသီလာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးရကျဆိုတာ …..ဥပမာ – 2018 ဇနျနဝါရီလ 10ရကျ ၊11 ရကျ ၊12 ရကျ တှမှော နောကျဆုံးရာသီပျေါခဲ့တယျဆိုရငျ….ထိုရာသီလာခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးရကျဖွဈတဲ့ ဇနျနဝါရီလ 10 ရကျကို ဆိုလိုပါတယျ။
ထိုရကျကို နောကျထပျ ရကျပေါငျး 280(9 လ နဲ့7ရကျ)ပေါငျးလိုကျရငျ မီးဖှားမယျ့ရကျ (ရကျသတ်တပတျ 40)ရပါတယျ။ပုံမှနျအားဖွငျ့ မီးဖှားမယျ့ရကျက ရကျသတ်တပတျ 40 အတိမှာဖွဈနိုငျသလို 2ပတျရှတေို့း 2ပတျနောကျကနြိုငျပါတယျ။သို့သျော ဒီနညျးဟာ ရာသီစကျဝနျးမှနျတဲ့အမြိုးသမီးတှမှောသာ ပိုတိကသြလို၊နောကျဆုံးရာသီလာခဲ့တဲ့ရကျကို တိတိကကြသြိဖို့လညျးလိုပါတယျ။ကိုယျဝနျဆောငျအမြားစုဟာ နောကျဆုံးရာသီလာခဲ့တဲ့ရကျကို လုံးဝမသှေ့ားတာ၊ မှတျမိပမေယျ့ ရကျအတိအကြ မသိတော့တာမြားပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကိုယျဝနျယူဖို့ဆုံးဖွတျထားသူအမြိုးသမီးမြားအနနေဲ့ လစဉျမိမိရာသီလာရကျမြားကို ပွက်ခဒိနျ (သို့) တဈနရောရာမှာ မှတျမှတျသားသားရှိထားသငျ့ပါတယျ။
အာထရာဆောငျးအကွောငျး ဆကျကွညျ့လိုကျကွရအောငျ! ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ အာထရာဆောငျးခဏခဏရိုကျရတဲ့အခါ မီးဖှားရကျလညျး အမြိုးမြိုးထှကျလာတတျပါတယျ။ဘယျရကျက အသခြောဆုံးလညျးဆိုတော့ အစောဆုံးရိုကျထားတဲ့ အာထရာဆောငျးမှ မီးဖှားရကျက အနီးစပျဆုံးပါ။ကိုယျဝနျပထမ 12 ပတျ (အထူးသဖွငျ့ ကိုယျဝနျ 8 ပတျနဲ့ 11 ပတျကွား)ရိုကျခဲ့တဲ့ အာထရာဆောငျးမှာဖျောပွထားတဲ့ မီးဖှားရကျက အတိကဆြုံးပါ။
နောကျဆုံးရာသီလာရကျကနတှေကျတဲ့ date နဲ့ ကိုယျဝနျပထမ 12 ပတျက အာထရာဆောငျး date နဲ့ ကှာဟမှုရှိနရေငျလညျး အာထရာဆောငျးdate ကိုပဲ အတညျယူပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အမြိုးသမီးတှေ ကိုယျဝနျယူဖို့ဆုံးဖွတျပွီးပွီဆိုရငျ မိမိရာသီလာရကျလေးတှေ သခြောမှတျထားဖို့နဲ့ ဆရာဝနျညှနျကွားတဲ့ အခြိနျမှာအာထရာဆောငျးရိုကျဖို့လိုအပျပါတယျ။အပျေါမှာလညျးသခြောရှငျးပွပွီးပွီဆိုတော့မီးဖှားရကျ due date အမြိုးမြိုးကွောငျ့ခေါငျးရှုပျနဖေို့ မလိုတော့ပါဘူးနျော!
” မီးဖွားရက် due date တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေလျှင် “
” အာထရာဆောင်း ၃ ခါရိုက်တယ်….due date(မီးဖွားမယ့်ရက်)က ၃ မျိုးထွက်တယ်……ပြီးတော့ ကိုယ်ဝန် စအပ်အပ်ချင်းတုန်းက အိုဂျီက ရာသီလာတဲ့ရက်နဲ့ ကိုက်ပြီးတွက်ပေးတဲ့ရက်ကလည်း တစ်ရက်ရှိသေးတယ်။ ဘယ်ဟာအတည်ယူရမလဲ မသိတော့ဘူး ”
မဗိုက်တို့ ကိုယ်ဝန်စအပ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဆရာဝန်က နောက်ဆုံးရာသီလာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးရက်ပေါ်မူတည်ပြီး မီးဖွားမယ့်ရက်ကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးရာသီလာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးရက်ဆိုတာ …..ဥပမာ – 2018 ဇန်နဝါရီလ 10ရက် ၊11 ရက် ၊12 ရက် တွေမှာ နောက်ဆုံးရာသီပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်….ထိုရာသီလာခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးရက်ဖြစ်တဲ့ ဇန်နဝါရီလ 10 ရက်ကို ဆိုလိုပါတယ်။
ထိုရက်ကို နောက်ထပ် ရက်ပေါင်း 280(9 လ နဲ့7ရက်)ပေါင်းလိုက်ရင် မီးဖွားမယ့်ရက် (ရက်သတ္တပတ် 40)ရပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့် မီးဖွားမယ့်ရက်က ရက်သတ္တပတ် 40 အတိမှာဖြစ်နိုင်သလို 2ပတ်ရှေ့တိုး 2ပတ်နောက်ကျနိုင်ပါတယ်။သို့သော် ဒီနည်းဟာ ရာသီစက်ဝန်းမှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာသာ ပိုတိကျသလို၊နောက်ဆုံးရာသီလာခဲ့တဲ့ရက်ကို တိတိကျကျသိဖို့လည်းလိုပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်အများစုဟာ နောက်ဆုံးရာသီလာခဲ့တဲ့ရက်ကို လုံးဝမေ့သွားတာ၊ မှတ်မိပေမယ့် ရက်အတိအကျ မသိတော့တာများပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူအမျိုးသမီးများအနေနဲ့ လစဉ်မိမိရာသီလာရက်များကို ပြက္ခဒိန် (သို့) တစ်နေရာရာမှာ မှတ်မှတ်သားသားရှိထားသင့်ပါတယ်။
အာထရာဆောင်းအကြောင်း ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်! ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အာထရာဆောင်းခဏခဏရိုက်ရတဲ့အခါ မီးဖွားရက်လည်း အမျိုးမျိုးထွက်လာတတ်ပါတယ်။ဘယ်ရက်က အသေချာဆုံးလည်းဆိုတော့ အစောဆုံးရိုက်ထားတဲ့ အာထရာဆောင်းမှ မီးဖွားရက်က အနီးစပ်ဆုံးပါ။ကိုယ်ဝန်ပထမ 12 ပတ် (အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန် 8 ပတ်နဲ့ 11 ပတ်ကြား)ရိုက်ခဲ့တဲ့ အာထရာဆောင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ မီးဖွားရက်က အတိကျဆုံးပါ။
နောက်ဆုံးရာသီလာရက်ကနေတွက်တဲ့ date နဲ့ ကိုယ်ဝန်ပထမ 12 ပတ်က အာထရာဆောင်း date နဲ့ ကွာဟမှုရှိနေရင်လည်း အာထရာဆောင်းdate ကိုပဲ အတည်ယူပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင် မိမိရာသီလာရက်လေးတွေ သေချာမှတ်ထားဖို့နဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ အချိန်မှာအာထရာဆောင်းရိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အပေါ်မှာလည်းသေချာရှင်းပြပြီးပြီဆိုတော့မီးဖွားရက် due date အမျိုးမျိုးကြောင့်ခေါင်းရှုပ်နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူးနော်!
သှေးခြို ဆီးခြိုနဲ့ မြိုးရိုး ဗီဇ